Ducaysane, xiriiriyaha barnaamijka la dagaalanka burcad badeeda oo ka xog waramay qorshaha dabargoynta burcad badeeda. – Radio Daljir
Ducaysane, xiriiriyaha barnaamijka la dagaalanka burcad badeeda oo ka xog waramay qorshaha dabargoynta burcad badeeda.
Agoosto 8, 2010 12:00 b 0
Garowe, Aug 08 – C/risaaq Maxamed Dirir ‘Ducaysane’, agaasimaha barnaamijka la dagaalanka burcad badeeda ee dawlada Puntland ayaa maanta shir jaraa’id kaga xog waramay raadka xun ee burcad badeeda, qorshaha dawlada Puntland iyo saamaynta bulsheed ee ummadda.
Warbixin ku saabsin dagaal khasaare gaystay oo dhex maray ciidanka Puntland & kuwa Sh. Atam.
Dr. C/salaam M. Xirsi, Agaasimaha mashruuca duumada ee Puntland oo iscasilay, dhaliilayna madaxda wasaarada caafimaadka.